Vaovao - Ankalazao amim-pifaliana ny tetikasa DTS Nestlé Torkia izay nandalo ny fitsapana ny fizarana mari-pana an'i Nestlé
Shandong Dingtaisheng Machinary Technology Co., Ltd., amin'ny maha-mpitarika ny indostrian'ny fanamafisam-peo ny sakafo sy zava-pisotro ao an-toerana dia nanao fandrosoana mitohy sy fanavaozana eo am-pandrosoana, ary nahazo ny fankatoavana sy ny fitokisan'ny mpanjifa ao an-trano sy any ivelany.
Tsara ny manamarika amin'ny tetikasa maro fa tamin'ity taona ity DTS dia nandresy ny tetikasa fisotroana kafe vonona ho an'ny orinasa Nestlé Turkey OEM, mamatsy fitaovana feno ho an'ny retort sterilisation rotary rano, ary miantsona miaraka amin'ny milina famenoana GEA any Italia sy Krones any Alemana. Mandritra io vanim-potoana io, manomboka amin'ny famokarana sy fanodinana, hatrany amin'ny FAT, hatramin'ny fametrahana ary ny fanirahana indray mandeha; "manana hery maharesy lahatra", ekipa DTS takiana henjana amin'ny kalitaon'ny fitaovana, vahaolana ara-teknika henjana sy feno, nahazo ny mpanjifa farany, Etazonia Ny fiderana ny manam-pahaizana Nestlé sy ny mpiasa fanamarinana avy amin'ny antoko fahatelo any Amerika atsimo. Taorian'ny folo andro niaraha-niasa fiaraha-miasa, ny fizarana hafanana an'ny sterilizer DTS amin'ny fanjakana mijanona sy mihodina dia mahafeno fepetra tanteraka, ary tafita soa aman-tsara ny fanamarinana mafana nataon'i Nestlé.
Inona no atao hoe fanamarinana mafana? Fa maninona no omen'ny mpanjifa avo lenta ny fanamarinana ny hafanana? Inona no tombony ananan'ny DTS raha te ho mendrika amin'ity asa ity?
Fanamarinana ara-pahasalamana, izany hoe, rehefa manao fitsaboana hafanana amin'ny vokatra, manamarina fa ny maripanan'ny faritra tsirairay amin'ny fitaovana fanamafisam-peo dia mitovy sy tsy miova mandritra ny fizotry ny hafanana tsy tapaka, ary avy eo manamarina raha mety hahatratra ny fiarovana ara-tsakafo ny fizotran'ny fanamorana. manatsara ny fizotrany hanatsarana ny kalitaon'ny vokatra ary hanafohezana ny fotoana fizotrany. Eo amin'ny sehatry ny zava-pisotro feno, ny famafazana sterilization mahay sy mahomby ihany no afaka manimba na mamono ny anzima sy ny zavamiaina bitika ao amin'ilay zava-pisotro ihany, ary miantoka ny fahafaham-po amin'ny vokatra ilaina amin'ny fanjarian-tsakafo. Noho izany, ny fanamarinana ny hafanana dia iray amin'ireo anton-javatra lehibe hiantohana ny fiarovana ny vokatra, ary iray amin'ireo fepetra ilaina amin'ny US FDA ho an'ireo mpanamboatra sakafo sy zava-pisotro. Na izany aza, tsy misy fenitra mitovy amin'ny fanandramana fanamarinana hafanana momba ny fitaovana fanamafisam-peo any an-trano sy any ivelany, fa ny fepetra takian'i Nestlé dia henjana tokoa. Ireo mpanamboatra fitaovana manana kalitao tena tsara, fampisehoana azo antoka ary rafitra fanamafisam-peo ihany no azo tafiditra ao anatin'ny lisitry ny mpamatsy azy ireo. Io koa no fototry ny fiveloman'ny DTS, mivoatra ary mandroso.
Ny DTS dia manana ekipa R&D matihanina, tanora ary mavitrika, fitaovana fanodinana "avo lenta, marina ary ambony" mitady ny fiovana amin'ny fikarohana, manavao ny fanovana. Mino aho fa handeha lavitra hatrany ny DTS ary hamorona fiainana tsaratsara kokoa.